आइपीओ: आज ग्रीनलाइफ हाइड्रोपावरले आइपीओ बिक्री खुल्ला गर्ने, कति कित्ता भर्नु उचित ? - Lekhapadhi मुख्य समाचार : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
लेखक : लेखापढी २३ माघ २०७७, शुक्रबार ०३:०८ मा प्रकाशित
काठमाडौं- आज शुक्रबार माघ २३ गते देखि ग्रीनलाइफ हाइड्रोपावरले सर्वसाधारणका लागि आइपीओ बिक्री खुला गर्दैछ ।
कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँको दरले ३५ लाख ९६ हजार ४०० कित्ता आइपीओ बिक्री गर्न लागेको हो । यसमध्ये ६९ हजार ९२८ कित्ता सेयर कम्पनीका कर्मचारी र १ लाख ७४ हजार ७८० कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि सुरक्षित गरिएको छ । सर्वसाधारण लगानीकर्ताले बाँकी ३२ लाख ५१ हजार ६५२ कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिने सक्नेछन् ।
ग्रीनलाइफले दोलखा जिल्लाका स्थानीयलाई कुल १८ लाख कित्ता आइपीओ निष्कासन गर्दा १ लाख ३ हजार ६०० कित्ताका लागि मात्रै आवेदन परेको थियो । कुल १६ लाख ९६ हजार ४०० कित्ता सेयर बिकेको थिएन । कम्पनीले यसअघि आयोजना प्रभावित स्थानीयले नकिनेको सेयरसमेत थप गरी सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न लागेको हो ।
यस आइपीओमा माघ २७ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । त्यस अवधिमा सबै आइपीओ बिक्री नभएमा फागुन ७ गतेसम्म बिक्री खुला हुनेछ । लगानीकर्ताहरुले आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । मेरो सेयरमार्फत अनलाइनबाट पनि सेयर भर्न सकिनेछ । यसको बिक्री प्रबन्धक बीओके क्यापिटल हो ।
कति कित्ताका लागि दिने आवेदन दिनु उचित?
अहिले आइपीओमा लगानीकर्ताको अधिक आकर्षण देखिएको छ । दोस्रो बजारले रेकर्ड बनाइरहेका बेला प्राथमिक बजारमा पनि लगानीकर्ताको संख्याले नयाँ नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै आएको देखिन्छ । यसअघि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको आइपीओ हालसम्मकै उच्च कुल १४ लाख ८१ हजार २८४ जनाले आवेदन दिएका थिए ।
न्यूनतम १० कित्ताका दरले बाँडफाँट गर्ने हो भने पनि जम्मा ३ लाख २५ हजार १६५ जना लगानीकर्ताले मात्र आइपीओ हात पार्ने देखिन्छ । यसआधारमा ग्रीनलाईफको आइपीओमा १० कित्ता आवेदन दिए पनि पुग्ने देखिन्छ । तर कसैलाई आफू धेरै भाग्यमानी छु भन्ने लाग्छ भने २० कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिन्छ ।
किनभने यसरी बाँडफाँट गरेर बाँकी रहने २ कित्ता सेयर २ जना लगानीकर्तालाई १ कित्ताका दरले थप हुनेछ । तसर्थ २ जना लगानीकर्ताले भने ११ कित्ता सेयर पाउनेछन् । विगतका आइपीओमा परेको आवेदनलाई हेरेर मात्र यो अनुमान गरिएको हो । तथापि, यसमा कति आवेदकले कति कित्ताका लागि आवेदन दिनेछन् भनेर अहिले नै अनुमान गर्नु उचित हुँदैन । ग्रीनलाईफको सेयर पाउन लगानीकर्ताले भाग्यमै भर पर्नुपर्ने देखिन्छ ।